Abenzi bephepha & Abahlinzeki - I-China Paper Factory
Alahlwayo Craft Paper Fries Box
Ukudla okusheshayo kuyathandwa emhlabeni jikelele, futhi phakathi kokudla okusheshayo, amafriji aseFrance angumkhiqizo osetshenziswe kakhulu njengoba eyinto yokudla emnandi futhi enamanzi. Ukugcina ukunambitheka kwabo nokukhulisa isikhathi sabo sokuphila, isidingo sesixazululo esiqinile nesikhangayo sokupakisha siyakhula. Amabhokisi athosiwe aklanywe kahle futhi aklanywe kahle athathwa njengesixazululo esifanelekile kakhulu semikhiqizo enjalo njengoba yenzelwe ngokukhethekile ukukhulisa izinga lokuvikelwa kwemikhiqizo yokudla efana namafriji. Badlala indima ebalulekile ekuheheni amakhasimende nasekuthuthukiseni ukuthengiswa nokusebenza kwabathengisi abafanele.
Lukathayela alahlwayo Fast Burger Box
Amabhokisi Amabhodi namaTrays eChunkai's Team Corrugated Board Amabhokisi anhlobonhlobo wemikhiqizo ye-Environmentally Friendly (Eco). Siphinde futhi sinikeze ukuphrinta okwenziwe ngokwezifiso ne-logo yakho kuningi lemikhiqizo yethu. Ngokukhetha imikhiqizo yethu ebolayo ngokubolayo uthatha igxathu elikhulu elibhekise ekuhlinzekweni kokudla okusimeme noma ngabe uyisitolo sekhofi, isitolo sokuthatha, ibhizinisi lokudla, indawo yokudlela, ihhovisi noma inkampani enkulu. Nciphisa i-carbon footprint yakho ngokukhetha imikhiqizo yethu.
Alahlwayo Craft Paper Isobho Bowl
I-Disposable Craft Paper Soup Bowl iyinkomishi elahlwayo eyenziwe ngephepha futhi evame ukufakwa noma ifakwe upulasitiki noma i-wax ukuvimbela uketshezi ekuphumeni noma ekucwangeni ephepheni.Kungenziwa ngephepha elenziwe kabusha futhi lisetshenziswa kabanzi emhlabeni jikelele. Singanikeza ngosayizi ohlukile kusuka ku-4oz kuya kuzinkomishi ezingama-30oz. Singakwazi futhi ukwenza ngokwezifiso ukuphrinta kombala noma igramu yezinto ezibonakalayo. Yini enye, futhi singakudizayinela okuphrintiwe.
Alahlwayo Craft Paper Isobho Cup
I-Disposable Craft Paper Soup Cup iyinkomishi elahlwayo eyenziwe ngephepha futhi evame ukufakwa noma ifakwe upulasitiki noma i-wax ukuvimbela uketshezi ekuphumeni noma ekucwangeni ephepheni.Kungenziwa ngephepha elenziwe kabusha futhi lisetshenziswa kabanzi emhlabeni jikelele. Singanikeza ngosayizi ohlukile kusuka ku-4oz kuya kuzinkomishi ezingama-30oz. Singakwazi futhi ukwenza ngokwezifiso ukuphrinta kombala noma igramu yezinto ezibonakalayo. Yini enye, futhi singakudizayinela okuphrintiwe.
Ifektri yeBrown Kraft Paper Box
Le Brown Kraft Paper Box Factory ikhethe izinto ezisezingeni eliphakeme, ukuthungwa kubucayi futhi kuthambile, kubushelelezi futhi kubushelelezi, kusebenza kahle, amamaki amaningi. Ubuciko obuhle, ukwelashwa okuphelele kwekhoneni, okuhle futhi okuhlala isikhathi eside. Ukuthungwa okuhle kwenza ibhokisi lesipho lithekwe kakhudlwana.
Ephrintiwe Pizza Box Umkhiqizi
Ukuvela kwebhokisi lePizza Eliphrintiwe elingu-8 kuhle, umbala ucacile, iphethini iyakhanga, futhi akulula ukufiphala. Indawo enethezekile futhi ebushelelezi, ukukhetha okuhle kukathayela, izinto eziphefumulekayo, kanye nokwakheka komgodi ovulayo kuqinisekisa ukuthi i-pizza ayonakalisi. Ibhokisi likhulu kakhulu futhi liqinile, izinto zokusetshenziswa zokudla ezinesitifiketi se-FSC, ziphilile futhi zinobungani bemvelo, ezingahlangabezana ne-FDA ejwayelekile, ephephile futhi engenakho ukungcola. Isakhiwo se-crease senza kube lula ukuvula nokuvala ngesikhathi sokuyisebenzisa.
Umakhi Webhokisi Lesithelo Esenziwe Ngamaphepha